बलिउड अभिनेत्रीहरूको बिकिनी मूल्य कति ? « dainiki
१४ माघ २०७८, शुक्रबार १४:२२
१४ माघ, काठमाडाैँ । बलिउड अभिनेत्रीहरू बिकिनी फोटोका कारण जहिल्यै चर्चामा रहन्छन् । बलिउडका सुन्दर र स्टाइलिस्ट अभिनेत्रीहरू प्रायः बिकिनी लगाएर आफ्नो खँदिलो शरीरलाई बाहिर देखाउँछन् । त्यसैले उनीहरूका फ्यानलाई उनीहरू कति मूल्यको बिकिनी लगाउँछन् भन्ने चासो सधैं भइरहन्छ ।
कम उमेरमै दर्शकको मनमा बस्न सफल अभिनेत्री जाह्नवी कपूरले हालैमात्र बिकिनी तस्बिर पोस्ट गरेकी थिइन् । स्विमिङ पुलमा जुन बिकिनी लगाएर फोटोसुट गराएकी थिइन्, त्यो बिकिनीको मूल्य १७ हजार चार सय ९० भारु पर्छ । हालका दिनमा अभिनेत्री अनन्या पाण्डे आफ्नो नयाँ फिल्म ‘गहारइयाँ’को प्रमोसनमा व्यस्त छिन् । अनन्याले पनि धेरैपटक बिकिनीमा फोटोसुट गराइसकेकी छन् । उनको थ्री पिस बिकिनीको मूल्य १६ हजार दुई सय ४० रुपैंयाँ पर्छ ।
हालैमात्र आमा बनेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि समय-समयमा बिकिनीको ग्ल्यामर तस्बिर पोस्ट गरिरहन्छिन् । उनले लगाउने गरेको रेड स्विमसुटको मूल्य २८ हजार दुई सय रुपैंयाँ हो । अभिनेत्री सारा अलि खान पनि स्विमवेयरलाई निकै देखिने गर्दछिन् । ओरेन्ज र पिंक रंगको स्विमवेयरमा सारा निकै सुन्दर देखिन्छिन् । यो स्विमवेयरको मूल्य १० हजार चार सय रुपैंयाँ हो ।
अभिनेत्री दिशा पटानी प्रायः छुट्टीमा गइरहन्छिन्, जहाँबाट उनले आफ्नो बिकिनी तस्बिर सार्वजनिक गर्छिन् । कसैले दिशाको ओरेन्ज शेड बिकिनी सम्झिएको छ भने त्यसको मूल्य १२ हजार आठ सय रुपैंयाँ पर्दछ । न्युजकारखाना
प्रकाशित मिति: १४ माघ २०७८, शुक्रबार १४:२२
बिबाहको ६ वर्षमा पनि नातिनातिना नजन्माएको भन्दै छोरा–बुहारीविरुद्ध मुद्दा !
२ जेठ, काठमाडाैँ । विवाह गरेको ६ वर्षपछि पनि नातिनातिना नजन्माएको भन्दै भारतको उत्तराखण्डका एक दम्पतीले
६ चैत, काठमाडाैँ । मानिसको भावना उसको सामाजिक बन्धनबाट धेरै प्रभावित हुन सक्छ । उनीहरुको सामाजिक
१३ माघ, काठमाडाैँ । तमिल नाडुमा एउटा विवाह कार्यक्रममा बेहुलाले थप्पड हानेपछि बेहुलीले विवाह रद्द
चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्लभ घटनाः क्यानडाकी महिलाको कलेजोमा भ्रुण
७ पुस, काठमाडाैँ । क्यानडामा एक महिलाको कलेजोमा भ्रुण विकसित भएको पाइएको छ । क्यानडाकी